चियाले चर्चित भोला भट्टराई
रंगेली, १६ मंसिर । चिया बेचने काम गर्छ/गर्छु । यो वाक्य सुन्दा तपाईँको मतिष्कमा के आउछ ? ए ! सानो व्यापार दैनिकी चलाउने मात्र यस्तै आउँछ है । तर, चिया बेचेर मनग्य पैसा मात्र होइन नाम कमायो भन्दा पत्याउन कठिन नै पर्छ । विराटनगरमा एक व्यक्तिले यो सोचलाई तोडिदिएका छन् । जसको नाम हो भोला भट्टराई ।
विराटनगरको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय आगाडिको बाटो छाडेर पूर्वपट्टि पस्ने अँध्यारो गल्ली छ । त्यहीँ अँध्यारो गल्लीभित्र छ, भोलाको चिया पसल । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म भोला दाइले बनाएको चियाको स्वाद लिन सक्नु हुन्छ ।
विराटनगरका युवा, विद्यार्थीको बीचमा परिचत नाम हो, भोला दाइको चिया पसल । उनको चियापसल विराटनगरको परिचयको सूचकसमेत बनेको छ । र्‍याप गायक गिरिष खतिवडाले भोला दाइको चियापसललाई गीतै बनाएका छन् । उनको सफल छोटो समयको भने होइन ।
साथीसँग उधारोमा चिया दोकान किनेर चलाउन थालेको पनि २८ वर्ष पुगिसकेको छ । साथीहरूले चलाइरहेको पसल उनले १५ हजार उधारोमा २०४८ सालमा लिएका थिए । जुन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पश्चिम अहिलेको मेलिना फोटो स्टुडियो भएको स्थानमा थियो । त्यस यता उनी निरन्तर चिया बेच्ने कामा लागिरहेका छन् । अहिले दैनिक तीन सय कपसम्म चिया बेच्ने गरेका छन् ।
२०–२२को उमेरमा चिया व्यापार थालेका उनलाई लत जस्तो भएको छ । चिया पारखीलाई चियाको तिर्सनाले भएजस्तो भएको बताउँछन्, चिया व्यापार । ‘एक दिन च्या बेच्न पाइँन भने टाउको दुखेजस्तो, कान बन्द भएजस्तो बिसन्चो हुन्छ,’ उनले भने, ‘चिया खान आउनेको हल्ला खल्लामा बस्ने लतजस्तै भइ सक्यो ।’
उनी बिहान ५ बजे उठेर मर्निङ वाकमा जाने गर्छन् । बिहान ६ बजे घर आइपुग्छन् । नित्य कर्म सकेर उनी ७ बज्दा पसल खोलिसक्छन् । त्यसपछि उनी ९ बजे रातिसम्म पसलमै रहन्छन् । उनले भने, ‘कम्तिमा ९ बज्छ नत्र १०–११ बजीनै हाल्छ ।’
त्यो समयमा खाली हात भने बस्न पाउँदैन न त टुसुक्क बस्न पाउँछन् । पसलमा भएको बेला १२–१३ घण्टासम्म भोला दाइ खडाको खडै रहन्छन् । उमेर ५० वर्ष पुगेका उनी दैनिक उभिँदा पनि खासै समस्य नभएको बताउँछन् ।
नन्दीकेशरी र चन्दमाया भट्टराईका ६ छोरा र ५ छोरीमध्येका माइला छोरा हुन् भोला । संखुवासभामा जन्मिएका भोलाले ५ कक्षासम्म त्यहीँ पढेको थिए ।
उनले ६ देखि १० सम्म भने विराटनगरको महेन्द्र राति माविमा पढेका थिए । उनी दिनमा अर्काको घरमा काम गर्ने र रात विद्यालय जान्थे । त्यसपछि उनले विभिन्न काम गर्दै जीवन गुजार गर्दै आएका थिए । साथीहरूले चलाइरहेको चिया पसल छाड्न लागेको जानकारी पाएपछि उधारोमा खरिद गरेका थिए । चिया पसलबाट कमाएर पैसा तिरेको उनले बताए ।
भोलाका दुई छोरा अनिश र आयुष छन् । ठूलो छोरा अहिले जागिरे छन् । कान्छा छोरा स्नातक तहको अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी श्रीमती धनमाया हुन् । उनको बाँकी जीवनको गुजारा गर्न चिया बेच्नुपर्ने जरुरी छैन ।
उनलाई चिया पसल छाड्न परिवारबाट पनि दवाव आइरहेको छ । ‘बुवा आमा र श्रीमतीले पसल छाड्न भन्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो काममा दुःख देखेर वहाँहरूले छाड्न भने पनि मैले छोड्न सकेको छैन ।’
दैनिक १२ लिटर दूधको चिया बनाएर बिक्री गर्ने भोलासँग दैनिक ६० लिटरसम्म दूध बेचेको अनुभव छ । पसलमा काम गर्ने मान्छे राख्न छाडेकोले दूध घटाएको उनले बताए । पहिला माग आएको ठाउँसम्म पुर्‍याउने गरेको उनले आजकल पसलमा मात्र बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
चिया बेचेर नै उनले घर घडेरी जोडका छन् । उनले अहिले आफ्नै घरमा चिया पसल सञ्चालन गरेका छन् । उनले २०५९ सालमा उक्त घर १५ लाखमा लिएको बताए । आफ्नै घरमा चिया पसल सुरु गर्नुअघि विराटनगरका ट्राफिक चोकवरपर ६ ठाउँमा सञ्चालन गरेका थिए ।
भोलाले आफूले चिया बनाएर मदकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई पनि ख्वाइसकेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र पनि दुई–तीन पटक चिया खान आएको उनले बताए ।